people Nepal » युवा वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरको अर्को आविष्कार: गणितमा पत्ता लाग्यो सारीकरण युवा वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरको अर्को आविष्कार: गणितमा पत्ता लाग्यो सारीकरण – people Nepal
युवा वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरको अर्को आविष्कार: गणितमा पत्ता लाग्यो सारीकरण
म्याग्दी– चार महिना अघि “दुर्यान्तर” नामक यन्त्र पत्ता लगाएर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चर्चा पाएका म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका २, ज्यामरुककोटका युवा वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरले फेरी अर्को ‘गणितीय सम्बन्ध’ पत्ता लगाएका छन् ।
उनले लामोसमयको खोजपछि गणितमा सारीकरण पत्ता लगाएका हुन् । सारीकरण पत्ता लागेपछि झन्डै ५००० वर्षदेखि रहस्यमा रहेको शून्यसम्बन्धी अंकगणितीय समस्याको समाधान भेटिएको हो ।
कुँवरले यस खोजका बारेमा स्पष्ट गर्नका लागि एउटा विस्तृत जानकारीसहितको लेखसमेत प्रकाशित गरेका छन् । ‘शून्यको अंकगणितीय भूमिका’ शीर्षकको उक्त लेखमा सार, सारीकरण, शून्यको अंकगणितीय भूमिका र अर्थ आदि शून्यसँग सम्बन्धित विविध विषयबारे स्पष्ट गरिएको छ ।
लेखमार्फत् शून्य जोर संख्या नहुनुका कारण र प्रमाणहरु दिएका कुँवरले बराबर र शून्यबीचको सम्बन्धको सीमा के हो ? भन्नेबारे पनि स्पष्ट पारेका छन् । शून्यले खेल्ने भूमिकाजस्तै भूमिका खेल्ने एउटा अर्को संकेत शून्यजस्तै आकारमा रही स्थानमानका रुपमा कसरी रहेको थियो ? भन्ने कुराको रोचक भेदसमेत उनको खोजमा स्पष्ट गरिएको छ ।
विगत २५ वर्षदेखि विज्ञानका क्षेत्रमा खोज गर्दै आएका कुँवरले वि. सं. २०६७ सालमा ‘भौतिक शास्त्रमा भएका केही त्रुटिहरुका खन्डन र समाधान’ शीर्षकको पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । उक्त पुस्तकमा शून्यले निम्ताएका समस्याहरुबारे तीनवटा छोटा लेखहरु प्रकाशित गरेका थिए ।
शून्यसँग शून्य बराबर हुन्छ भनी मान्दा निम्तिने गणितीय समस्याले वर्षौँदेखि विश्वभरिका गणितज्ञहरुलाई सताएको थियो । त्यसको कारण र समस्याको निवारण सारीकरणको पत्ता लगाइबाट स्पष्ट हुन पुगेको कुँवरले बताएका छन् ।
केही समयअघि दुर्यान्तर पत्ता लगाएका कुँवरले विज्ञानसम्बन्धी ५ वटा पुस्तक र दर्जनौँ अनुसन्धानपत्रहरु लेखेका छन् । उनले शून्यसँग सम्बन्धित भाव, अभाव र विपरीत भावसम्बन्धी नयाँ धारणा पनि उक्त लेखमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
आफ्नो लेखमा चिनियाँ लेखन पद्धति र हिन्दू अरबिक लेखन पद्धतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै शून्यको वास्तविकता पहिल्याएका खोजकर्ता कुँवरले आफू गणितको विद्यार्थी भएकाले पनि गणितमा गहिरो रुचि रहँदै आएको बताए ।
सन् ४७६ मा भारतमा जन्मिएका खगोलशास्त्री तथा गणितज्ञ आर्यभटले सर्वप्रथम शून्य पत्ता लगाएको मानिन्छ । त्यसपछि सन् ५९८ मा जन्मिएका अर्का खगोलशास्त्री तथा गणितज्ञ ब्रह्म गुप्ताले आफ्नो पुस्तक ‘ब्रह्मस्फूट सिद्धान्त’मा शून्यका विभिन्न सम्बन्ध र स्वरुपबारे स्पष्ट पारेका थिए । गुप्ताले त्यतिबेला दिएको मान्यतामा केही सुधार भए पनि शून्यको अंकगणितीय स्वरुप र सम्बन्धका सन्दर्भमा त्यसभन्दा पछि थप नयाँ कुराहरु जोडिन सकेका थिएनन् । रातोपाटी बाट साभार